Ngwa Mica na ibe ya na ụlọ ọrụ mkpuchi | Lingshou
Ngwa Mica na esere na ụlọ ọrụ mkpuchi
(1) Mmetụta Ọkụ
Na eserese eserese, flaky filler ga-etolite nhazi ihe nkwekorita nke oma, si otua na - egbochi oke ngbanye nke mmiri na ihe ndi ozo, ma oburu n’eji mica ure di elu (dayameta nke di nha kariri ugboro iri ise, ọkacha mma ugboro 70), nke a ụdị ọgbụgba ga-agbatịkarịrị ugboro atọ. Dika mica filler dị ọnụ ala karịa resin pụrụ iche, ọ nwere nnukwu teknụzụ na akụ na ụba.
Na nkenke, iji akwa mica ntụ ntụ dị elu bụ ụzọ dị mkpa iji melite ogo na arụmọrụ nke mgbochi mgbochi na akwa mgbidi. N'oge usoro mkpuchi, tupu ihe osise agba ahụ, mica bọọdụ ga-edina n'okpuru esemokwu ahụ wee mezie onwe ya na ibe ya na elu ihe nkiri ahụ na akpaghị aka. Ntughari nke udiri udiri udiri udiri udiri a dika ihe ojoo na aru ihe ndi ozo na aru ya, ma obu ihe ogugu ya kariri. Nsogbu a bu na ulo oru mica aghaghi ikpu oke zuru oke, dika ulo oru ndi mba ozo tuputara ubochi ya ka okpomoku di okpukpu iri ise, kariri ihe kariri iri asaa, ma obughi ihe g’esi na ya puta ihe adighi nma bụ, ibu ka ukwuu mgbochi mgbochi dị irè na otu olu nke nzacha, na Kama nke ahụ, ọ bụrụ na mgbawa bụ oke oke, mgbe ahụ, ọ nweghị ike etolite ọtụtụ n'ígwé mgbochi. Ọ bụ ya mere na akwụkwọ nchekwa akwụkwọ nwere enweghị ụdị ọrụ a. Ọzọkwa, perforation na avulsion na mica mgbawa ga-emetụta ọrụ mgbochi ihe a (ihe dị iche iche nwere ike ịbanye na ngwa ngwa). Nke dị gịrịgịrị na mica mgbawa bụ, ibu ihe mgbochi ebe nwere unit olu nke nzacha. A ga - arụpụta ihe ka mma site na nha nke oke (oke obere adịghị mma mgbe niile).
(2) Imeziwanye ihe Nkiri na mebere igwe na fim ahụ
Iji udu mmiri mica ntụ ntụ nwere ike melite usoro nke anụ ahụ na ihe eji eme ihe nkiri. Igodo ya bu njiri mara ihe nke ihe na-acha odo odo, ya bu, dayameta nke okpomoku nke ogwe-achapu ihe na dayameta nke fibrous. Ihe nhicha ihe di iche di ka sands na okwute n’ime ciment iji welie nchara.
(3) Meziwanye Ngwongwo mgbochi nke ihe nkiri a
Ihe isi ike nke resin n’onwe ya nwere oke, na ike nke ọtụtụ ụdị nke nzacha adịghị elu (dịka, talcum ntụ ntụ). Kama nke ahụ, mica, otu n'ime ihe ndị mejupụtara konkiri, dị ukwuu n'ihe banyere ike ya na ike ọrụ. Yabụ, na-agbakwunye mica dị ka nzacha, ọrụ mgbochi mgbochi nke mkpuchi nwere ike dị oke mma. Ọ bụ ya mere eji eji ntụ ntụ mica mee ụcha ụgbọ ala, agba agba n'okporo ụzọ, ihe eji egbochi ihe mgbochi ụlọ na akwa mgbidi.
(4) Mkpịsị ugodi
Mica, nke nwere oke nguzogide eletriki (1012-15 ohm · cm), bụ n'onwe ya ihe mkpuchi mkpuchi kachasị mma ma ọ bụ teknụzụ a maara ama n'ihu ya iji ya meziwanye ihe mkpuchi nke ihe nkiri. Ihe na-adọrọ mmasị bụ na mgbe ha na-arụ ọrụ na ihe eji emepụta silicon resin na silicon Organic na boric resin, ha ga-atụgharị gaa n'ụdị akwa seramiiki nke nwere ezigbo igwe na-arụ ọrụ ma na-egbochi ihe onwunwe ozugbo enwere oke okpomọkụ. Yabụ, waya na eriri nke ihe ndị a na - ejikọ ọnụ nwere ike idowe ihe mkpuchi mbụ ya ọbụlagodi na ọkụ, nke dị oke mkpa maka ogbunigwe, ọwara, ụlọ pụrụ iche na akụrụngwa, wdg.
(5) Igwe na-enwusi ike
Mica ntụ ntụ bụ ezigbo ihe nnụnụ ọkụ na-ere ngwa ngwa ngwa ngwa, ọ nwere ike iji ya mee ihe na-agba ọkụ na agba na-eguzogide ọkụ ma ọ bụrụ na etinyere ya na njigide ọkụ halogen.
(6) Anti-UV na Inway Inagide
Mica dị ezigbo mma na ichebe ultraviolet na ụzarị infrared, wdg. Ya mere ịtinye mmiri ala mica ntụ ntụ n'ime agba n'èzí nwere ike ime ka ihe nkiri ahụ dị ka ihe mgbochi ultraviolet ma kwụsịlata ịka nká. Site na ịrụ ọrụ ya nke na - echebe ụzarị infrared, a na - eji mica eme ihe na - echekwa okpomọkụ na ihe mkpuchi ọkụ (dịka agba).
(7) Mbelata Sedimentation
Arụrụ ọrụ mgbochi mmiri nke ala mgbochi mmiri dị oke mma. Mpempe pere mpe na obere obere nwere ike kwụsịtụ na ọkara na-enweghị usoro hierarchical. Ya mere, mgbe ị na-eji mica ntụ ntụ dị ka nchekwa dị ka nke ahụ ga-ebelata ngwa ngwa, nkwụsi ike nke nchekwa mkpuchi ga-abawanye nke ukwuu.
(8) Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na ebe obibi ọkụ dị elu
Mica nwere ikike dị ukwuu maka radiating ụzarị infrared. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-arụ ọrụ na iron ironide, wdg, ọ nwere ike ịmepụta mmetụta radieshon dị mma. Ihe atụ kachasị na-etinyere bụ itinye ya n'ọrụ na akwa mkpuchi ikuku (na-ebelata ogo nke anwụ na-acha site na iri afọ iri). Ọtụtụ eserese nke ihe ndị na-ekpo ọkụ na akụrụngwa nke okpomoku dị ha niile mkpa iji agba pụrụ iche nwere ntụ ntụ mica, n'ihi na akwa mkpuchi dị otú a ka nwere ike ịrụ ọrụ n'okpuru nnukwu okpomọkụ dị ka 1000 ℃ ma ọ bụ karịa. N'oge ahụ, nchara ahụ ga-acha ọbara ọbara, mana agba ahụ adịghị ọcha.
(9) Mmetụta Gloss
Mica nwere ezigbo glosscent gloss, yabụ, mgbe ị na-eji akwa mica nke nnukwu-akwa na nke dị gịrịgịrị, ihe, dị ka agba na mkpuchi, nwere ike na-egbu maramara, ma ọ bụ nke na-egbuke egbuke. Kama nke ahụ, ezigbo mica ntụ ntụ ga-eme ka nchegharị na ntughari ugboro ugboro n'ime ihe ahụ, si otú a na-emepụta ihe na-atọ ụtọ.
(10) Mmetụta ụda Ọkụ na Ubi
Mica nwere ike igbanwe usoro ihe nlere nke ihe ahu ma mezie ma obu ghaghachie viscoelasticity ya. Ihe ndị dị otú ahụ nwere ike ịmịcha ike dị egwu ma mee ka ike gwụ ụda na ebili mmiri. Na mgbakwunye, ebili mmiri na ụzụ na-ada ụda ga-etolite ntụgharị ugboro ugboro n'etiti mkpụrụ osisi mica, nke na-ebutekwa ike. Yabụ, eji ala ala mica na-ejikwa ihe na - akwadebe ụda na ụda ọfụma.